Ndi ekwentị InFocus di nma? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Na-elekwasị anya na ekwentị - azịza bara uru
Na-elekwasị anya na ekwentị - azịza bara uru
Ndi ekwentị InFocus di nma?
AKWFKWỌ ND IN KWESFRF KWESFR.
Companylọ ọrụ ahụ ọkachamara na ịnye ọnụ ala dị ala ma e jiri ya tụnyere smartphones sitere na ụdị ndị ọzọ nwere nkọwa yiri ya. Foxconn na arụpụtara igwe ya. Dị ahụ abanyela n'ahịa ahịa ama ama nke India.
na infocus m8 NT bụ aha jọgburu onwe ya maka nnukwu ekwentị ahụ, ọ nwere otu ụdị nkọwa ahụ dị ka 1 + 1 ma nwee ogo dị mma kama obere batrị dị ntakịrị ma na-efu naanị 160 na mgbado anya, otu ụdị ahụ ọ bụ Snapdragon 801 2 ihe iji nweta ihuenyo 1080p dịka nke Oneplus Otu maka ọnụ ala dị ala nke 160, mana tupu ị pụọ ma zụta ya, m ga-agwa gị ihe dị mma na ihe na-abụghị, yabụ na-ele anya na ngwaike ahụ mara mma bụ maka otu nha dị ka 1 + 1 ma dịkwa njọ, ọ dị mfe ijide n’aka otu aka ma nwee nnukwu ọfụma Ọdịdị ekwentị a adịghị na eserese ahụ ihu na azụ nke ekwentị ka ejiri Gorilla Glass 3 kpuchie ya na bezels ejiri ọla edo rụọ ọmarịcha ọla edo mara mma ma ọ bụrụ na iberibe ekwentị ahụ na ala nke ngwaọrụ ahụ nwere bọtịnụ iven nke na-enwupụta na otu onye na-ekwu okwu n'okpuru, achọrọ m n'eziokwu ka ọkà okwu ahụ dị azụ ma nwee ekwentị mkpumkpu ma ọ bụrụ po ssible, ma obughi nani na m na eme mkpesa banyere ihe m choro, n'okpuru bọtịnụ menu bu ihe ngosi ngosi kwa Anaghi m etinye oge buru ibu na olu na ike n'ihi na ha di nma ma enwere m ya n'anya. ebe a n'ezie chere banyere imewe ebe a na ọ na-egosi na e nwere a okuku n'akụkụ a nke ekwentị na ya can nwere ike na-eche ebe olu ala button bụ onwe ya bụ ndị nke ezi mma n'akụkụ aka nri nke ekwentị na ị nwere ike ịchọta a akara nke micro SIM na oghere kaadi microSD A na-ejikwa iko kpuchie azụ nke ngwaọrụ ahụ ma nwee 13 megapixel -CameraLED flash InFocus logo na, oddly enough, the NFC and 4G logo, but they are small and unobtrusive Iko n'ihu na azụ na-adọta mkpịsị aka, mana ha anaghị ahụ anya dị ka na-eto eto, nke dị mma nke ukwuu mgbe ị na-egosi ndị ọzọ foto a, m na-atụle ogo nhazi ma hụ ngwaọrụ a dịka otu n'ime ihe kachasị mma ọ na-adị oke na aka na wow mgbe ị lee ya anya kariri m inwe uche g lances na ekwentị a dị jụụ n'ọtụtụ ebe m ga-ekwu na iko ihu abụọ na-eme ka ụjọ na-atụ gị ịhapụ ya mana emere m ekwentị si na tebụl dị ihe dị ka mita 3 ma ọ bụ mita 1 n'ịdị elu, ọbụnadị ọkọ. Ihuenyo ebe a bụ ihuenyo 5.5 nke anụ ọhịa nwere mkpebi nke 1080p Nke a na-eweta foto dị oke nkọ ma doo anya, weebụsaịtị ederede ma na-eme foto na nnabata ma na-ele anya nke ọma Ọdịdị agba dị ezigbo mma ma na-eme ka ihuenyo ahụ dị mma.
Vibdị vibrancy nwere ike gbanwere ntakịrị, agbanyeghị, na-eme ka agba dịchaghị mma n'okpuru ntọala ngosi. Enwere nhọrọ ole na ole ị nwere ike ịhọrọ iji hazie ihuenyo nwere ike ịba uru dabere n'otú ịchọrọ ka ihuenyo gị si ele anya, ya na nwughari kachasị dị na nits 500 dị ezigbo mma, mana ngebichi n'onwe ya na-egosipụta ọfụma ọbụlagodi na nnukwu nchapụta nke siri ike ịnweta ìhè anyanwụ, Gorilla Glass dịkwa ike nke ukwuu ka ị ghara ichegbu onwe gị gbasara ịkọ ya. . N'ozuzu ogo ihuenyo dị mma ọ dịghị ihe na-eme mkpesa ebe a otu ọkà okwu nọ n'okpuru bọtịnụ capacitive, na-agbapụ gị ka ọ wee daa ụda karịa ịda ụda olu - ọ bụrụ na ọkà okwu mara mma ma ọ bụghị oke olu, ị ga-eme ya nwere nsogbu ịnụ okwu dị nro na gburugburu ebe dị jụụ dị ka batrị cafeteria bụ naanị 2600 mAh ma e jiri ya tụnyere puku atọ na karịa mAh na ekwentị ndị yiri ya dị ka Oneplus One, ka anyị hụ ka batrị ahụ si arụ ọrụ ma tọọ ihu ngosi ihuenyo ruo nkeji iri abụọ ma weghachite web peeji nke karịrị Wi-Fi ọ bụla sekọnd ole na ole ekwentị nwụrụ mgbe anọ na ọkara awa Na isiokwu playback ule, ihuenyo nchapụta bụ nits 250 na ọkọlọtọ nkọwa isiokwu na-egwuri na ekwentị maka 6 awa na 9 nkeji.
Nsonaazụ ndị a dịkarịrị ala karịa ọkara karịa, yabụ enweghị oke. Enwere m ike ịgbanye chaja maka awa 16. Ojiji m bụ ọtụtụ ozi ederede na Facebook, ịgụ ozi, na ụfọdụ dịka egwuregwu.Enwere m oge ngụkọta nke oge 3 tupu oge ekwentị m dị na 10 elekere. ndụ batrị bụ bụghị pụtara ìhè, karịsịa tụnyere oneplus ndị ya kpọmkwem osompi ma ọ bụrụ na ị na-a ìhè ọrụ ị na-adịghị na-echegbu onwe nke ukwuu banyere ndụ batrị ị nwere ike mfe alanarị a ụbọchị, ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-ajụ ma ọ bụ dị arọ Nke a onye ọrụ ekwentị nwere ike ọ gaghị enwe ike iru gị ụbọchị niile yabụ debe chaja gị nso na gam akporo 4.4.4 arụnyere na ngwaọrụ a yana mmelite Lollipop dị mana enwere m njehie mgbe ị wụnye ojiji ekwentị a dị ezigbo mma mgbe Snapdragon801 bụ Ngwaọrụ na-ejide ngwa ngwa ma na-ebupụta ngwa ngwa na mmechi nke ngwa abụghị nsogbu na ihe niile dị ezigbo mma, mana enwekwara akụkụ ụfọdụ adịghị mma enwere ụyọkọ bloatware ekwentị a enweghị ike iwepụ ya n'enweghị mgbọrọgwụ na n'ezie emetụta ahụmahụ Standard launcher adịghị mma ma, ma m na-eji dochie ya na Google Ugbu a launcher nke ka mma Ọ nweghị ihe ọ bụla smart mmegharị na ekwentị a na enwere m obere ndakpọ olileanya, ma hig h mma mkpọchi ka ngosi Ikanam na ekwentị dị n'okpuru menu button na-arụ ọrụ dị ka ọtụtụ ndị ọzọ na ndị ọzọ.
Ikanam ahụ na-acha agba dị iche iche iji mee ka ị mata ozi dị iche iche na ọtụtụ asụsụ ma kwụsịtụ isiokwu iji hụ ma ọ na-akwado asụsụ gị nkewa nke 12 gigs nke dị mma, ekwentị na-ekpo ọkụ ọfụma ọfụma, maka ọrụ ndị bụ isi dị ka Chrome, ọ dịghị ekpo ọkụ n'ọnọdụ ndị a. Ọ na-ekpo ọkụ ma ọ bụrụ na ị na-egwu egwuregwu na-aga n'ihu ruo otu awa na ọkara ma ọ bụ karịa, ọ bụ ezie na onye nhazi ahụ na-akpaghị aka iji mee ka ekwentị ahụ dị jụụ, Snapdragon 801 bụ ihe nhazi dị ike ma enweghị m nsogbu na-agba ọsọ nke ukwuu na egwuregwu na mkpebi 1080p, na DeadRising arụnyere ma gbuo ya ma kpọọ ya mgbe enweghị igbu oge ma ọlị. Egwuregwu ndị na-erughị ala dị ka Boom Beach na Agario gara nke ọma.
Amalitela igwu egwu na Carrio, ọ na-eri ahụ ara ara m gbakwara uwe m wee nweta akara ihe dị ka 40,000 nke bụ ihe dị ka nkezi maka Snapdragon, ma ọ bụrụ na ọ dị ntakịrị na mpaghara dị ala, mana nke ahụ abụghị ihe ọjọọ nye gị onye ọrụ Cellular bụ iji otu mmachi a ekwentị a na-enweta bụ nnukwu Oku na ederede ederede nke ọma ma ghara ịkwụsị ma nwee mgbaàmà siri ike n'oge niile m mere ule ọsọ ma nweta ọsọ ọsọ ọsọ maka njikọ 3G na HSPA +, ọ bụ ezie na ọ nweghị ihe pụtara ìhè ebe a bụ nnabata WiFi bụ mara ezigbo mma agbanyeghị Bluetooth na-arụ ọrụ nke ọma mana nnabata GPS bụ nkezi m anaghị efunahụ mgbaama ma ọ bụ wụsa ma GPS mere ya? mgbe ụfọdụ lag n'azụ m n'ezie ọnọdụ n'agbanyeghị na Njikọta dị mma n'ozuzu Wi-Fi na Bluetooth n'ikuku na-arụ ọrụ dị mma, GPS bụ naanị ngalaba nke a ekwentị na-adịghị arụ ọrụ dị ka nke ọma dị ka m na-atụ anya isiokwu site na nke a na ngalaba nke nyochaa bụ nke mejupụtara obere vidiyo nke ejiri InFocus m8 MT were gbado anya Jiri Sony Exmor R sensor ya na oghere F 2.2. Ka anyị hụ ka igwefoto si dị mma nke ọma na enwere m obi ụtọ na igwefoto dị na ekwentị a n'ọnọdụ ọkụ dị mma. Ou nwere ike ịse foto mara ezigbo mma. Hogbapụ ọkụ dị oke ọsọ ma ọ bụ obere oge na-egbu oge n'etiti ịpị bọtịnụ na ịnara foto n'onwe ya na ọnọdụ HDR dị ala adịghị njọ nke ukwuu, ọ ga-esiri ike ịse foto mara mma na obere ọkụ, mana ha ka nwere ike ịgafe qualitydị isiokwu ahụ, dịka ị nwere ike ịhụ, dịkwa mma, igwefoto isiokwu ihu n'ihu. ọ dị mma nke ọma maka ịkpọ oku na ma eleghị anya, foto ole na ole adịghị mma, dị ka ị pụrụ ịhụ na nkebi a Site na mkpokọta isiokwu m masịrị igwefoto mma enweghị m mkpesa ebe a yabụ gịnị bụ mkpebi nke InFocus m8 10t nwere ụdịdị kachasị mma maka ọnụego ahụ Snapdragon8012 gigs RAM ihuenyo 1080p na ihe igwefoto igwefoto Sony maka naanị 160 dollar nke nwekwara ụdị ịtụnanya dị ịtụnanya dị ka HTC One m9 ma ọ bụ iPhone 6 mana dị mwute ikwu na nke ekwentị abụghị nke zuru oke mana ọ siri ike maka akụkụ ndị achọghị ndụ batrị ekwentị na mbụ, ebe m ji n'aka na ọ dị nkezi.
Ndụ bụ ihe zuru oke maka ọtụtụ mmadụ, ezughi m oke. Anaghị m amasị ego nke bloatware na ekwentị a na-emecha ọ na-akawanye ubé ọkụ na-akawanye mma gbara na oké ihe m na-eme. Ekwesịrị m ikwupụta na m hụrụ n'anya ụlọ dị mma n'anya m na-akpachapụ anya na ekwentị n'ihi na ọ bụ iko zuru oke n'akụkụ abụọ, ọ bụ ezie na m na-akwado onye ọ bụla na ekwentị a n'ihi na nke a bụ otu n'ime ekwentị kacha mma nke 2015 n'echiche m Daalụ maka na-ekiri ma nwee ọmarịcha ụbọchị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ isiokwu ndị ọzọ dị ka nke a, pịa bọtịnụ ịdenye aha n'okpuru wee pịa otu n'ime isiokwu ọ na-achọ ịgbapụta
Kedu ihe mere InFocus?
N'oge gara aga, NASDAQ depụtara ụlọ ọrụ ọha na eze,Ntinyezụrụ Image Holdings Corp., nke John Hui nwe, na 2009 ma ugbu a ọ bụ ụlọ ọrụ enyemaka nke nwere isi ya na isi ya na Tigard, Oregon.
Cheedị banyere onye mkpọrọ nọ naanị ya n'ụlọ mkpọrọ na-eche ịnwụ. Ọ maghị mgbe ọ ga - eme, mana ọ ma na ọ bụ ihe a na - apụghị izere ezere. Chee echiche banyere egwu, ụjọ, nrụgide nke onye mkpọrọ ga-enwe.
Ọ na-eteta kwa ụbọchị n'amaghị ma ọ bụrụ na ọ mere nke ikpeazụ ya. Ọ na-ehi ụra n’abalị n’amaghị ma à ga-adọpụta ya n’elu ihe ndina ya ka ọ nwụọ. Onye mkpọrọ na-eteta n’ụbọchị.
Ọ nọdụ naanị ya na echiche ya. Ọ na-agagharị ala na ala ka ọ na-amị amị. E mechisịrị ọnụ ụzọ nke ọnụ ụlọ mkpọrọ ya.
Ọ swings elu. Mgbe onye mkpọrọ ahụ si n’ọnụ ụzọ ghere oghe na-ele ya, nanị ihe ọ na-ahụ bụ paseeji na-adịghị ogologo. Ọ na-eji nlezianya ahapụ ụlọ ahụ.
Otu ọnụ ụzọ na nsọtụ nke ọzọ nke ụlọ nzukọ ahụ mepere emepe. Onye mkpọrọ na-aga nwayọọ nwayọọ, n’amaghị ihe ọ ga-atụ anya ya. Mgbe ọ na-agbada na paseeji, ọnụ ụzọ nke ọnụ ụlọ mkpọrọ ya na-agbachi ma na-eche n'ihu ya ozugbo.
Ọ na-abanye n'ọnụ ụzọ na njedebe nke paseeji ahụ, na-enwupụ ìhè site n'ime ụlọ ya na-ekpuchi anya. N'ime ụlọ ahụ, a na-eche onye a kpuchiri ekpuchi. N'aka-ya ka ọ di.
Oge eruola. Echere ahụ agwụla. Onye mkpọrọ ahụ ji nwayọọ gafere wee hapụ eriri ahụ n’olu ya.
Obi ruru ya ala na ichere na amaghị ya emechaala. Ihe mkpuchi ahụ na-ahapụ ụlọ ahụ. Ọ jụụ ọzọ.
Oge na-aga, mgbe ahụ na mberede ala dara n'okpuru onye mkpọrọ. Eriri sie ike. Ogbugbu ahụ na-aga n’ihu dịka ntaramahụhụ jọgburu onwe ya site n’oge gara aga, mana ọ bụghị.
Ọ na-eme ugbu a. Ọnọdụ a bụ akụkụ nke onye mkpọrọ nọ ọnwụ ọnwụ na Japan. Ka anyi tulee ikpe onwu onwa nke Japan na nke United States na omume n’ime mba abuo ndia mepere emepe, o bu ihe itu anya na o bughi otu i siri chee.
kedu otu tere aka iji igwe kwụ otu ebe rụọ ọrụ
Onwere ochichi mba uwa abuo nke mbu na uwa nile nke n’eme ka ndi ha gburu. Mba abụọ ndị a bụ Japan na United States of America Japan, na nkezi, na-atụ mmadụ ole na ole mkpọrọ karịa United States. Na Japan, 39 n’ime mmadụ 100,000 ọ bụla tụrụ nga ọ dịkarịa ala otu oge na ndụ ha.
Na United States, ihe dịka 655 n’ime 100,000 mmadụ ọ bụla tụrụ mkpọrọ. Ahaghị nhata ndị a dị n’etiti ndị eji eji eji na -eme ka ị chee na Japan nwere sistemụ ụlọ mkpọrọ ka mma yabụ yabụ ụdị mmadụ kacha mma nke usoro ọnwụ. Ihe ị ga - achọpụta nwere ike iju gị anya mgbe anyị tụlere usoro omume ọnwụ na Japan ma jiri ya tụnyere United States mgbe a mara mmadụ ikpe ma maa ya ikpe ọnwụ site na ụbọchị igbu ya.
Nke mbụ, ka anyị hụ otú Japan na United States si dị iche n’ikpe ndị mkpọrọ ikpe ọnwụ. Na United States, onye e jidere nwere ikike ịgbachi nkịtị na onye ọka iwu nọ ya na-agba ajụjụ. Nke a nwere ike iyi ihe dị mma na ọtụtụ anyị, mana ọ bụghị ikpe na Japan.
Ọ bụrụ na ajụrụ onye agbachitere na Japan, a gaghị ekwe ka ọ nọchite anya ya. Ha nwere ike ịgbachi nkịtị, mana dị ka anyị ga-ahụ, nke a na-abụkarị ikpe. Na Japan, ndị uwe ojii nwere ike ijide ndị a na-enyo enyo ruo ụbọchị 23 na-enweghị akaebe.
Enwere akụkọ banyere ndị uwe ojii Japan na-emekpa ndị a na-enyo enyo n'uche na n'ụzọ anụ ahụ iji nweta nkwupụta. Ọ bụ na 2016 ka Japan malitere idekọ ihe ndekọ ederede nke ajụjụ ọnụ. N'ụzọ dị mwute, maka ndị a na-enyo enyo, nke a metụtara naanị 3% nke ikpe ndị omempụ Japan.
Naanị ajụjụ ọnụ e dekọrọ bụ ebubo siri ike dị ka igbu ọchụ. A na-ajụ ajụjụ ndị ọzọ niile na nzuzo usoro ikpe nke US na-eme nke a tupu onye nke atọ abịa mgbe a na-ajụ onye na-enyo enyo ajụjụ. Onye mkpọrọ nwere ike ịgbaghara ikike ọ nwere ịkwado onye ọka iwu, mana nke a adịkarịghị obere.
Ọbụna n'okwu ikpe ndị a na-adịghị ahụkebe nke onye ọka iwu na-anọghị, a na-enyocha ajụjụ ahụ, na-amanye nkwupụta site na iji usoro ndị a na-apụghị ịtụkwasị obi. Nationstù Mba Ndị Dị n'Otu na ndị na-agbachitere ihe ndị ruuru mmadụ achọpụtawo n'ọtụtụ nnyocha na nkwupụta site na mmekpa ahụ na omume obi ọjọọ abụghị ihe a pụrụ ịtụkwasị obi mgbe niile. N'ụzọ dị mwute, usoro ikpe mkpegbu ndị Japan anaghị ahụ ya n'ụzọ ahụ.
E jidere Iwao Hakamada ma mesịa maa ya ikpe maka igbu ọtụtụ mmadụ na Japan. O kwuru na ya karịrị awa 240 karịa ụbọchị iri abụọ. Enweghị ederede ederede banyere usoro ịgba ajụjụ, yabụ na anyị agaghị ama ihe mere n'ezie n'oge ahụ.
Agbanyeghị, enweghị ike ịgọnahụ oge Hakamada nọrọ n'ụlọ mkpọrọ. Iwao ama esịne ke otu ibat ibat owo emi ẹkekpede ikpe n̄kpa ete esie ẹnyụn̄ ẹkop uyo esie. Ma akwara auditory bịara.
Iwao nọrọ naanị ya n'ọnwụ ọnwụ ruo afọ iri ise, na-eme ka ọ bụrụ onye mkpọrọ ọnwụ kachasị dị ogologo oge niile. N’oge na-adịbeghị anya, site n’enyemaka nke ụlọ ọrụ iwu dị iche iche, nwanne ya nwanyị rụgidere ụlọ ikpe mpaghara ka ọ nye iwu ka e bido ikpe ọzọ. Courtlọ ikpe mpaghara kpebiri ịhapụ Iwao iji chere ikpe ikpe n'ụlọ.
A tọhapụrụ ya n'ụlọ mkpọrọ n'ihi ọnọdụ uche ya na-esighi ike ka ọ gachara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 50 na ọnwụ ọnwụ, Iwao ka na-echere ikpe ikpe ma ọ bụrụ na a chọpụta ya ikpe nke ugboro abụọ ọ nwere ike ịlaghachi n'ụlọ mkpọrọ. Ruo oge ahụ, Iwao na-anọdụ n'ụlọ na-eche ka ọ mara ma ọ ga-abụ onye nweere onwe ya ma ọ bụ laghachi na ọnwụ ọnwụ. N'ọtụtụ ọchịchị onye kwuo uche ya, nkwupụta enwetara mgbe ihe karịrị 200 awa nke ịgba ajụjụ bụ ihe a na-ewere dị ka iwu na-akwadoghị, nke a na-apụghị ịdabere na ya, na anaghị atụle ya n'ụlọ ikpe.
Nke a abụghị ikpe na Japan, nke mere na mba ahụ nwere ike ịnwe ọnye ikpe 99% nke onye ejidere maka mpụ na nkwupụta ndị uwe ojii nwetara n'agbanyeghị agbanyeghị ụzọ onye ahụ mara ikpe. Ihe akaebe megide ha nwere ike ịdị obere ma ọ nwere ike ịbụ na a mekpọrọ ha ọnụ, mana nke ahụ anaghị egbochi steeti ịkatọ ha naanị ikpe ikpe ha kwenyere na-eduga na nkwenye. Nke a bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla a na-ekpe ikpe.
Ebe ọ bụ na ọnụ ọgụgụ mpụ dị ala na Japan, a ga-ahụ onye ọ bụla e mere ka ọ maa ikpe mpụ mpụ tupu a nụ ihe akaebe ahụ. Nke a na - ebute nkwenye dị mfe na ọnụego nkwenye dị elu. United States nwekwara ọnụego nkwenye dị elu.
Nkwenye ikpe na United States abawanyela n'ime ọtụtụ iri afọ ma ugbu a gburugburu 90%. Japan na-etu ọnụ ọnụego nkwenye 99%. Ọnụọgụ ndị ogbugbu ahụ dị elu na Japan karịa na United States? Ihe omuma ohuru sitere na Japan gosiputara na egburu mmadu 24 n’etiti 2012 na 2016.
Onu ogugu ndi eji egbu mmadu akarubeghi mmadu iteghete n’otu afo. N’afọ 1998, Mịnịstrị na-ahụ maka ikpe na Japan bipụtara akụkọ kwuru na e gburu mmadụ asaa n’otu izu, ọnụ ọgụgụ kasịnụ nke ndị egburu n’oge ahụ. N'agbanyeghị agbanyeghị mmetụta ọ na-enwe maka ọnwụ ọnwụ, ọnụ ọgụgụ ndị na-egbu na US bụ ihe jọgburu onwe ya.
N’afọ 2018 naanị, e gburu ndị mkpọrọ iri abụọ na ise nwụrụ. Nke ahụ karịrị ihe Japan gburu n'ime afọ atọ. N’afọ 2019, e gburu ndị mkpọrọ iri abụọ na abụọ na United States.
crossfit ab mgbatị
Nke a pere mpe pere mpe karịa mmadụ niile e gburu na Japan n’agbata afọ 2012 na afọ 2016. Japan nwere ike ịnwe ọnụego ikpe karịa United States, mana US na-egbu ọtụtụ ndị mkpọrọ karịa Japan. Nke a nwere ike bụrụ ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ, mana n'ezie enwere oke ọdịiche dị n'etiti mba abụọ ahụ, nke pụtara na otu na-eche ndị omempụ karịa nke ọzọ, ya mere na-echekwa ikpe ọnwụ ọzọ.
Ndi ndị mkpọrọ nwere ikike ọbụla mgbe amachara ha ikpe ma maa ha ikpe ọnwụ? E nwere ndị otu na-ahụ maka ihe ndị ruuru mmadụ na United States nke na-enyocha ọnọdụ ndị eji eji maka ọnwụ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ òtù ndị a niile ruuru mmadụ kwetara na ntaramahụhụ ọnwụ na usoro gara aga na-emebi ikike nke ndị mkpọrọ. Ọ bụghịkwa naanị ndị mkpọrọ nọ n’usoro ọnwụ na-enwe nsogbu.
Ọnọdụ maka ndị mkpọrọ oge niile na US nwere ike isi ike, ọ bụrụ na ị kwenyeghị anyị, lelee otu n'ime akwụkwọ ozi ndị ọzọ gbasara ụlọ mkpọrọ, echere m na ihe ị ga-ahụ nwere ike iju gị anya, na Japan ọ bụ ntakịrị aghụghọ mgbe ọ bịara ikike ndị bụ isi. Dị ka ọ dị na United States, ndị mkpọrọ ọnwụ nwere ike ịga thelọikpe Kasị Elu maka ịnụrụ ikpe ọzọ. O bu ihe nwute nye ndi eji eji no na Japan, na n’ihi na i na ario ikpe, ekwenyeghi na ogaghi egbu gi tupu egee okwu gi.
Enweela ọtụtụ akụkọ banyere ndị ejidere na-arịọ maka ikpegharị ma gbue ha mgbe ha na-echere ịnụrụ ikpe ụlọ ikpe. Iwu na Japan kwuru na a ga-egbu mmadụ n’ime ọnwa isii ụlọ ikpe kpebiri. Nke bụ eziokwu bụ na ogbugbu ahụ ga-ewe ọtụtụ afọ, mana naanị n'ihi na ịnwere ikpe ikpe apụtaghị na a ga-echebe gị pụọ na ogbugbu na Japan.
kalori na-ere ọkụ yoga poses
Otu nsogbu na-enye ndị mkpọrọ nọ na mba abụọ nsogbu bụ na ọtụtụ na-arịa ọrịa isi mgbaka. A na-elegharakarị ihe a anya, ọ bụrụ na ndị mkpọrọ ndị a nọpụrụ iche, ọnọdụ ha nwere ike ịka njọ. Ma Japan ma United States na-ejide ndị mkpọrọ nọ n'ụlọ mkpọrọ nanị ha ruo mgbe oge ruru igbu ha, na-ebogbu ndị mkpọrọ meworo agadi nke ukwuu.
Maka ndị a, ịnọ naanị ha nwere ike ibute nkwarụ anụ ahụ, na-ebute oke mgbu ndị mkpọrọ nọ na ya. Amalitela ụbọchị mbibi nke United States. A na-ewere nke a ka ọ ka mma maka nkwụsi ike nke uche nke ndị mkpọrọ.
N'aka nke ọzọ, Japan anaghị enye akara ụbọchị mbibi. Kama nke ahụ, ndị mkpọrọ nọ na ọnwụ ọnwụ na Japan nwere ike ikpe ikpe oge ọ bụla mgbe ikpe mara ha. Ọtụtụ achọpụtaghị na a ga-egbu ha ruo ụtụtụ nke ụbọchị a ga-egbu ha.
N’ihi nke a, ndị nọ n’ụlọ mkpọrọ na-enwekarị naanị otu elekere ma ọ bụ abụọ iji kwado maka ihe ga-abịa. Kọmitii UN na-emegide ịta ahụhụ akatọla Japan maka omume a. Obi erughị ala nke amaghị nke ọma mgbe a ga-egbu ya bụ ahụhụ nkịtị, ọ bụghị naanị maka ndị mkpọrọ ma maka ezinụlọ ha.
Prisonfọdụ ụlọ mkpọrọ na-asọpụrụ ihe ọ bụla onye mkpọrọ tụrụ aro ya, ụfọdụ adịghịkwa asọpụrụ ya. Otú ọ dị, a na-enye ndị mkpọrọ ọnwụ ọnwụ nri ikpeazụ ha. Ebe ọ bụ na ụbọchị ọnweghị ụbọchị a ga-egbu ndị mmadụ na Japan, a gaghị enye ndị mkpọrọ nri ikpeazụ ha n'ụbọchị a ga-egbu ha.
Ọ bụrụ n ’ị ga-echerịrị ugbu a, kedụ mba ị chere na ọ ga-abụ mmekpa ahụ ndị mmadụ na-eme? Ọ ga - abụ Japan yana ogbugbu ya dị ịtụnanya? Ma ọ bụ United States, ọnụ ọgụgụ ya dị elu nke igbu ọchụ? otu ụzọ dị mma karịa nke ọzọ? Anyị ekwe ka ị bụrụ onye ọka ikpe. Na Japan, a na-egbu ndị mmadụ egbu egbu. A na-ekpuchi onye mkpọrọ ahụ anya na mkpuchi ojii n'isi ya tupu egbuo ya.
Iji mee ka ndị na-egbu ndị mmadụ ghara ibu ibu, ndị ọrụ ụlọ mkpọrọ atọ pịa bọtịnụ imeghe ọnụ ọnyà ahụ n'otu oge. N'ụzọ ahụ, ha amatụghị ihe ntinye bọtịnụ na-akpata ọnwụ onye mkpọrọ ahụ. Na United States, ihe dịtụ iche.
Ọtụtụ mgbe, a na-egbu onye mkpọrọ ahụ site na ọgwụ na-egbu egbu. A cockụ mmanya na-egbu egbu dị iche site na steeti, mana ọ na-abụkarị ụdị nke mkpọnwụ tupu enyere nsị ikpeazụ. Nke a na-abụkarị ndị mmadụ na-enweghị ọzụzụ ahụike.
Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iche echiche nke inye kemịkal iji gbuo mmadụ ga-emegide iyi iyi ndị ọkachamara n'ịgwọ ọrịa na Hipocratic. Ma n'adịghị ka Japan, onye na-egbu mmadụ ahụ maara na enweghị mgbagha ọ bụla na ọ bụ ya gburu onye mkpọrọ ahụ. N'adịghị ka Japan, United States na-enyekwa ohere ụfọdụ ụzọ igbu egbu n'ọkwa steeti kama ịnwe usoro iwu gọọmentị etiti.
Statesfọdụ steeti na-ekwe ka onye ahụ e gburu egbu họrọ usoro igbu ha. Steeti ndị dịka Alabama na Tennessee dị na United States kwere ka ndị mkpọrọ họrọ usoro ha ga-anwụ. Nke a mere ka ụfọdụ ndị mkpọrọ rịọ ka e jiri oche eletrik gbuo ha.
A kwụsịrị oche oche eletrik mgbe e lere ya anya dị ka onye dị mma karịa iji kemịkal iji gbuo ụlọ mkpọrọ. Nke a nwere ike ịbụ n'ihi na ọdịdị nke onye ọkụ ọkụ ọkụ sie na-adịchaghị mma karịa onye mkpọrọ na-arahụ ụra ụra wee nwụọ. Ma na steeti ebe ndị mkpọrọ nwere ike ịhọrọ ụzọ ha ga-esi gbuo ndị mmadụ, ọtụtụ ahọrọla ịpụta site oche oche eletrik, ụdị mmegbu ọzọ nke ndị mkpọrọ nọ na United States ahọrọla ịnwụ site na egbe egbe.
Na 2010, Ronnie Lee ghọrọ onye Gardner gbagburu ya na Utah. Ọ bụ ihe dị mma karịa mmadụ ịhapụ ka mmadụ kpebie otu esi egbu ha? Ikekwe, mana nye ahụike nke ndị mkpọrọ ahụ, ọ nwere ike ọ bụghị. Otu n'ime esemokwu dị ịtụnanya dị n'etiti ọnwụ ọnwụ na Japan na United States metụtara ndị mmadụ n'ozuzu ya.
Japan nwere nkwenye dị elu karịa ikpe karịa United States. 80% nke ụmụ amaala Japan kwadoro ọnwụ ọnwụ, ebe na 2018 naanị 54% nke ụmụ amaala US kwadoro ọnwụ ọnwụ. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị kwenyeghị na Japan na-egbu ndị Japan, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ụmụ amaala Japan anaghị eme ya.
Ihe dị iche n’agbata usoro ọnwụ na Japan na ọnwụ ọnwụ na United States doro anya. O doro anya na otu dị mma karịa nke ọzọ ma ọ bụ na e kwesịrị ịnwụ ọnwụ ma ọlị. Na 2019, Japan kwetara na ha ga-akwụsị ọnwụ ọnwụ site na 2020.
Organizationstù ndị na-ahụ maka ihe ndị ruuru mmadụ, gụnyere Nationstù Mba Ndị Dị n'Otu, na-etinye ha nnukwu nrụgide ka ha kagbuo ntaramahụhụ ọnwụ ahụ tupu Japan anabata ndị Olympic. Mkpebi ahụ egosiri ndị isi gọọmentị na Japan. Kwan a etu mpɔn sen biara a yebetumi afa so ayɛ saa ne sɛ yebefi komam abɔ mpae.
Iji mee ka ọ dị mma, United States anabatala Olimpik ọtụtụ oge gara aga, n'oge na-adịbeghị anya na 2002, mana United States ka na-etinye ntaramahụhụ ọnwụ na usoro Ọnwụ Olimpik bụ ihe Japan na United States nwere. Maka ama ụlọ mkpọrọ ndị ọzọ, lelee Eziokwu 50lọ Mkpọrọ iri anọ nke You Ga-ekwenye. Ma ọ bụ, jiri nlezianya lelee ihe ọ dị ka ịbụ onye a na-agba ọsọ n'egwuregwu ma lee ihe 24 awa ikpeazụ nke ndị mkpọrọ nwụrụ anwụ dị ka
Kedụ ka ekwe ntị si elekwasị anya?
Na usoro nke otúgbado anyaigwe na-arụ ọrụ,ekwentịese foto nwere movable anya m nke nwere ike ịgbanwe ihegbado anyasite na-agbanwe ọdịiche dị n'etiti anya m na ihe oyiyi ihe oyiyi. Nke a n'ibu usoro na auto-gbado anya(AF) sọftụwia na - enyere igwefoto aka ịchọpụta ebe ọ bụlagbado anyan'ebe ahụ.
Kpachara anya, dịka ego gị kwa ụbọchị bụ akụ nwere oke, ị nwere ike ịnweta ya karịa n'oge ọ bụla. Anyị bi n'oge nke ndọpụ uche mgbe niile. Itoolu ruo ise apụọ, 24/7 abatala.
Enwere m smartphone, ana m eweta ọrụ m n'ebe niile, mana ngwaọrụ anyị na-eme ka anyị ghara ịma. Mgbe m nyochachara ọrịa neurobiology maka afọ 10, echere m ihe teknụzụ na-eme n'ụbụrụ anyị. Achọrọ m ịghọta sayensị nke ndọpụ uche ma mụta itinyekwu uche na arụpụta anyị.
N'ụzọ ụfọdụ, a na-amata anyị ọkwa 63 + kwa ụbọchị. Anyị gafere ozi ịntanetị 90 wee dee ihe dị ka 40 n’ime ha. Ná nkezi, anyị ịgbanwee atọ niile nke aga-eme.
Mgbe anyị na-ekpughere ihe ndọpụ uche, akụkụ abụọ nke ụbụrụ, ngwongwo ngwugwu na akụkụ ahụ dị n'ihu, bụ ụdị ọgụ na-ebuso ibe anyị agha. Researchfọdụ nnyocha na-atụ aro na ngwongwo ngwugwu na-aza ihe ndọpụ uche, cortex dị n'ihu, gụnyere itinye aka na-achọ ihe ọmụma, na-enyere anyị aka ilekwasị anya mgbe ọrụ cortex ahụ na-abanye na cortex nke ihu. Mgbe cortex dị n'ihu nwere ike ijide ngwugwu ahụ, lekwasị anya.
Brainbụrụ na-ekpebi ihe dị mkpa na ihe na-abụghị na nke ahụ na-ewe igbe akwụkwọ ozi na ị naghị arụ ọrụ ọgụgụ isi siri ike, ị ga-eme ya n'ihi na enwere mkpebi mkpebi ndị a niile. Ọ bụrụ n'ịlelee ozi-e a, achọrọ m nke ahụ na mkpebi nke ọ bụla ga-ewe obere mbọ nghọta na ihe, mana mgbe ị gbakwunye mana 2,000 n'ime ha ị ga - akwụsị enweghị ike ịme mkpebi ndị ọzọ dị mkpa ma emesịa, n'agbanyeghị na ị na - eji ha - Gwa m ntakịrị ihe gbasara ọmụmụ ihe ị jiri email - Ihe anyị hụrụ bụ na ịlele ozi ịntanetị ọtụtụ mgbe kwa ụbọchị jikọtara ya na nchekasị na oke - N'ime ọmụmụ ihe ahụ, a gwara otu ndị ka ha lelee ozi ịntanetị ha oge ọ bụla ha chọrọ. ụbọchị niile, ebe ndị ọzọ nọ na-eme ya na igwe - Anyị chọpụtara na ndị nyochara ozi ịntanetị ha maka atọ - Na-agbakọta ruo ugboro ise kwa ụbọchị, enweghị nkụda mmụọ na obere nsogbu - Gịnị kpatara ọrụ ndị a ji dị ka ezigbo ala, gịnị kpatara ha ji enwe nrụgide ma na-akpata nchekasị? Cheedị uche bụ ọdọ mmiri a dị jụụ ma ọ bụ na ị maara ọdọ mmiri na-atụgharị uche wee mara ọkwa ọ bụla ntakịrị ntakịrị mmiri na ọdọ a. Anyị nwere ike iche echiche banyere ikike ịtụgharị uche, ebe ị maara ikike iji lekwasị anya n'ihe na-eme gburugburu anyị, mana mgbe anyị nwere ọdịda ndị a niile, oge niile email dị ka mmiri ozuzo, ọkwa na-eme dị ka oke mmiri ozuzo na arụpụtaghị anyị. itinye uche.
Ọ bụrụ na anyị eburu ibu ọgụgụ isi, ọ ga-adịrị anyị mfe ịpụpụ uche anyị. Ma Ọkwa dị na ekwentị anyị na-adọta ekwentị na-adọpụ uche anyị na ọrụ anyị na-arụ, n'ihi ya, ọ nwere ike gbalịsie ike imekwu - oge ọ bụla ị dọpụrụ gị uche, ịkwesịrị ịgbanwe uche gị nke chọrọ ịgbanye ya ma gbanyụọ ya. n'eziokwu ịrụ ọrụ iji mee ka ike gwụ gị na njedebe nke ụbọchị - gịnị ka anyị dịka ndị ọrụ ekwentị na-eme iji belata nke a? - ụfọdụ n’ime ihe ndị m na - eme ka m guzobere na ị nweghị oge ọgbaghara ị nwere ike n ’ekwentị gị ma ọ bụrụ n’ ịmara n’enweghị ọkwa na - enweghị isi. M n'ozuzu na-eme ka ekwentị m gba nkịtị.
M n'ezie ntakịrị riri ahụ na email m na mgbasa ozi mgbasa ozi na ozi dịka ọtụtụ ndị mmadụ, yabụ m na-emepe ngwa ndị a oge niile na anaghị m echetara m na m ga-emepe ha oge ọ bụla . - Iji rite uru na teknụzụ ọhụụ, anyị nwere ike ibu ụzọ chee echiche etu na mgbe a ga - esi dabere na ya - Anyị mere nyocha ọ bụghị na nzukọ mana n'ogige ụlọ akwụkwọ ebe anyị jụrụ ụmụ akwụkwọ, ma ọ bụ iji ekwentị ha ma ọ bụ na-enweghị enyemaka nke ha ekwentị ịchọta ụlọ. Ee ee, ụmụ akwụkwọ ahụ dabere na ekwentị ha rutere n'ụlọ ahụ ngwa ngwa, mana otu ụmụ akwụkwọ ahụ chere na ha enweghị njikọ na obodo ha, yabụ na nke a abụghị ajụjụ ị maara na anyị kwesịrị tufuo ngwaọrụ ndị a, mana kedu ụgwọ maka ngwaọrụ a bara uru.
Ekwenyere m na a na-anapụ anyị njikọ ndị a nke jikọrọ ọha mmadụ ọnụ. - Ngwaọrụ anyị na ngwa anyị abụghị naanị ụzọ isi bibie ha n'ọfịs. Mkparịta ụka nkịtị n’ọrụ na-eme ka anyị nwekwuo njikọ, na-enwe obi ụtọ karị ma na-arụpụta ihe, nke ahụ bụ ihe sayensị gwara anyị. (egwu music)
Kedu ka ekwentị autofocus si arụ ọrụ?
Nke a bụ nke kachasị dị irèautofocusteknụzụ na ahịa. Dị ka sọrọ-pixelNKE, na-achọpụta ogeọrụsite na iji photodiodes gafee ihe mmetụta iji tụọ ọdịiche dị na mpaghara gafee ihe mmetụta ahụ wee kpalie ihe nlebara anya na oghere iji webata ihe oyiyi ahụ.08.05.2017
Ndi oru InFocus di nma?
NtinyeIN3114 Conferencelọ NzukọIhe nyocha
2010 Gbara AkaNtinyeIN3114projectorna-amịpụta foto dị oke ocha, dị nkọ, dị elu yana vidiyo na isi iyi data. Maka ego ọ na-esi ike iti.
Ndị ọrụ InFocus ọ dị mma ọ bụla?
NaNtinyeIN1118HD na-bụukwuhọrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ 1080p kacha mmaprojectornwere ezigbo onyonyo azụmaahịa, ma ọ bụrụhaala na ị ga-arapara na onyonyo data ma ọ bụ nwee okwu na mpụga gị (ma ọ bụ na ị maara na otu dị ebe ị na-eme atụmatụ ịtọlite).Mar 29 2017
InFocus na-aga ahịa?
Naụlọ ọrụo doro anya na e nwere ihe niile-ụlọ ọrụnzukọ 12:30 pm taa iji gwa ndị otu ha na ha na-akwụsị ọrụ ngosi.Eprel 10 2019
Ebee ka InFocus mere?
NtinyeCorporation bụ ụlọ ọrụ America nke dị na steeti Oregon ma bụrụkwa ọsụ ụzọ ụlọ ọrụ na onye ndu ụwa na ahịa nkwukọrịta anya. Tọrọ ntọala na 1986, ụlọ ọrụ ahụ na-etolite, na-arụpụta ma na-ekesa ndị ọrụ ngo na ngosipụta aka dị ukwuu.
Kedu ihe igwefoto igwefoto na-elekwasị anya?
Mgbe ị na-ese foto nke ihe, gịigwefotoekwentịgajidere ìhè na-esite na ya. A na-eji oghere convex naigwefotokagbado anyaọkụ na-abata na ihe mmetụta CMOS. Ihe mmetụtagamgbe ahụ digitize ìhè nagagbanwee ya na foto JPEG nke ahụ echekwara na gịama.Ọgọst 16 2019
Kedu ka ekwe ntị si emetụta ịta ahụhụ?
A ọhụrụ ọmụmụ bipụtara na magazin Social Psychology na-akọ na nanị idi nso nke gịekwentịezuola ịdọpụ uche gị na ọrụ mgbagwoju anya - ọbụlagodi na ọ bụghị na ya. Onye na eche uche naekwe ntịakpata na-emebi ọ bụghị naanị na-elekwasị anya na arụpụta ihe, kamakwa ọ na-emetụta obi ụtọ na-adịghị mma.Nwa 9 2014
Kedu ka ọrụ si elekwasị anya na smartphone?
Akụkụ buru ibu nke foto dị mma na-eme ka elekwasị anya nke ọma. Hapụ ilekwasị anya ọbụlagodi obere nwere ike gbanwee foto nwere ike ịbụ nke ọjọọ. N'agbanyeghị oke nrụgide ha, igwefoto ama ama enwetala nke ọma na oge. Otu akụkụ nke ọganihu a nke na-anaghị ekwu okwu nke ukwuu bụ sistemụ akpaaka akpaaka.
Kedu ekwentị nke izizi iji nweta akpaaka akpaaka?
Ewebata igwefoto igwefoto mbụ nke Samsung na Galaxy S7, dual-pixel auto-focus na-ewe ihe PDAF na-aga n'ihu na ya. Anyị na-ekwu okwu banyere àmụmà-ọsọ ọsọ na-elekwasị anya nke na-adọrọ mmasị ọbụna site n'ụkpụrụ igwefoto raara onwe ya nye site na ebe teknụzụ a si.
Kedụ ka autofocus si arụ ọrụ na ekwentị?
Iji chọpụta mgbe ihe oyiyi na-elekwasị anya, ekwentị gị na-eji algọridim dabere na ịlele ọdịiche ahụ. N'ozuzu, ọkwa nke ọdịiche ga-adị elu na ihe oyiyi mgbe ihe a na-elekwasị anya (onyinyo ahụ nwere atụmatụ dị nkọ na agba ndị ọzọ pụtara ìhè). Ọ bụrụ na onyinyo ahụ esiteghị na-elekwasị anya, agba ga-agbaghasị ibe ha.